December 2012 | မိုးဇက်
ဒဏ်ရာရ နှလုံးသားတစ်ခု၏ အော်ငြီးမှု
________________________________________________________________________________________________________________________________________ |||||| နှစ်ဦးသဘောတူနေ့ဆွဲများ |||||| ____ မြင်မြင်ခြင်းတစ်ယောက်ဘဝထဲကိုတစ်ယောက် လေးလေးနက်နက်နစ်မြုပ်ခဲ့ကြ ......___________________ တွေ့တွေ့ခြင်းတစ်ယောက်အာရုံထဲရှိတာတစ်ယောက် အလိုအလျှောက်သိမြင်နားလည်ခဲ့ကြ ......._________________ တစ်ယောက်ရင်ဘက်ကိုတစ်ယောက် ဓါးနှင့်ပေါက်လက်တည့်စမ်းခဲ့ကြ ~~ ~~~________________ စိတ်ကူးယဉ်ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို အတူဖုတ်ပြီး မက်မက်မောမော စားခဲ့ကြ ...............___________________ ကျေနပ်ခြင်းသီးစုံဖျော်ရည်တစ်ခွပ်ကို အတူဖျော်ပြီး အငမ်းမရမော့သောက်ခဲ့ကြ ......______________________ ပင်စည်တစ်ခုပေါ် ပိုးမွှားတွေလိုတွယ်ကပ် ~~~ ~~~~ ပြင်းပြတဲ့တပ်မက်ခြင်းတွေနှင့် အတူတစ်ကွရှင်သန်ခဲ့ကြ .......______________________ တစ်ယောက်အိမ်မက်ကိုတစ်ယောက်ဖောက်ထွင်း ~~~ ~~~ ငြိမ်သက်ခြင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပင့်သက်တွေ ပြစ်ချခဲ့ကြ ......._______________________ တစ်ယောက်မျက်လုံးထဲတစ်ယောက်ပြေးဝင် ~~~ ~~~ ပွင့်ပွင့််လင်းလင်းချဉ်ခြင်းတတ်ခဲ့ကြ ......... ______________________ တစ်ယောက်မနက်ဖြန်ကိုတစ်ယောက်စာချုပ် ~~~ ~~~ မမြင်ရတဲ့အချိန်ကာလကို ဖမ်းဆုပ်ခဲ့ကြ .......___________________________ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ နောက်ကျနေတဲ့ ရထားပေါ်မှာ ~~~ ~~~ ကြင်ကြင်နာနာပြစ်မှား တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပြစ်စလက်ခတ်အသားခြင်းထိမ်ိခဲ့ကြ ........______________________________ ရေစီးသန်တဲ့မြစ်ကိုစွန့်စွန့်စားစားကူးဖြတ် ~~~ ~~~ တစ်ယောက်အတ္တကိုတစ်ယောက် ကြက်ခြေခတ်မိခဲ့ကြ .........________________________________ ရှုပ်ထွေးကောက်ကွေ့လွန်းတဲ့လောကအလယ် ~~~ ~~~ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မိုက်မိုက်ကမ်းကမ်း ငြိတွယ်မိခဲ့ကြ ~~~ ~~~~ ဘာများဆန်းကျယ်လို့လဲကွယ် ... ...__________________________ လှသန်း(လက်မရွံ့ ကဗျာဆရာ)
တေးသွား အစ အဆုံး ၊ သံဇဉ် အက်အက် တစ်ပုဒ် ၊ ၂၀၁၂ရဲ့ ခပ်ကြေကြေ ရနံ့တစ်စ
Posted on Friday, 28 December 2012
ဒီလိုပဲ ၂၀၁၂ ရဲ့ တေးသွားအစကတော့ မည်သူမှ မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရှန်ပိန်ခွက်လေးမြောက်ပီး ချီးယားလုပ်ခဲ့တယ် ။ နွေရဲ့ အရိပ် သင်္ကေတ တစ်ခုကို ဖွင့်ဖောက်ရင်း ကျွန်တော့ရဲ့ ကျမ်းမာရေးမှာ အလှည့်အပြောင်းဖြစ်ခဲ့တယ် ....
ဗြုံးစားကြီး ထကလိုက်တဲ့ ကကွက်ဆိုးထဲမှာ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်မြှောပါရင်း ၊ ဝေဒနာနှင့် မဖြစ်မနေ စကားတွေထိုင်ပြောရတာ အကြာကြီး ၊ တစ်ချို့နေ့ရက်တွေမှာ ရင်းနှီးမှုတွေတစ်သီကြီးရှိသော ကျွန်တော့အမ ကျွန်တော့ဆီရောက်လာခဲ့တယ် ၊ အဲဒီနေ့ရက်တွေဆိုတာတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ အထီးကျန်မှု တစ်ချို့ကို အလင်းတစ်ပွင့်နှင့်တိုက်စားပေးသွားခဲ့ ၊
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကတော့ ခပ်နွမ်းနွမ်းနှင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ပါပဲ ............
မောလိုက် ဟိုက်လိုက် နှင့် ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေလဲ ပျော့တွဲလာလိုက်တာ တစ်ချက်တစ်ချက် ဟိုး အဝီဇိ ထိ စိမ့်ဝင်ဝင်သွားတယ် ။
တစ်ချို့ တစ်ချို့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ့်ဘာသာပိတ်ထားရင်း နေတတ်လာခဲ့ ..
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဟာ အနာတရ ဒါးချက်တွေနှင့် ကျွန်တော့ ကျောကို / ရင်ဘက်ကို အထက်ထက် မွန်းခံခဲ့ရ ............ ၊ လောကကြီးကို ခပ်ရွတ်ရွတ် ပြန်ကြည့်တတ်လာတယ် ... ၊ နာနာကျည်းကျည်း သီချင်းတွေအော်ဆိုတတ်လာတယ် ၊ မှုတ်ဆိတ်မွေးတွေ ရှည်ထွက်လာအောင် ခပ်ရိုင်းရိုင်းဖြစ်လာတယ် ၊တစ်ချက် တစ်ချက် ရင်ဘက်တစ်ခုလုံး အောင့်သက်ပီး လူ့ရှေ့သူ့ရှေ့ ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံး မတတ်နိုင်အောင်ကို ပြစ်လဲဘူးတယ် ၊ ပြစ်ပြစ်လဲတယ် ၊ ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ်လဲတယ် ၊ ကျားကျားလျှားလျှားဖြစ်ပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ် လဲတယ် ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အံ့သြလောက်အောင်ကို / အံ့သြယူရလောက်အောင်ကို ပြစ်လဲတယ် ။
အဲဒီနှစ်လယ်ပိုင်းလား ............. ??????
သိပ်ပီးပြောင်းလဲမသွားသေးဘူး စိတ်ဒဏ်ရာတွေတော့ ထူထူလာတယ် ၊ ဆေးရဲ့ ဒဏ်ကလဲ မေမေ မွေးပေးလိုက်တဲ့ ဒီခန္ဓာကို တစ်ဖြည်းဖြည်းဖျက်စီးစပြုလာတယ် ။ အဲဒီလို နည်းနည်းသုံးသပ်မိတဲ့ နှစ်လယ်လောက်မှာ “ အဟက် ” ခနဲ ကိုယ့်ဘာသာကို ခြောက်ကပ်ကပ်ရီ(ရည်) လိုက်တယ် ။ နည်းနည်းတော့ အသက်မပါတဲ့ရီ(ရည်)သံမှန်း ကိုယ့်ဘာသာကိုသိပေမယ့် ဒီတိုင်းလေးမျက်နှာလွဲပီး နောက် တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ကြိမ် နောက်တစ်ကြိမ်
“ အဟက် ” ............ “ အဟက် ” ........... “ အဟက် ”
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ရဲ့ စာမျက်နှာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဖွင့်ထုတ်ကြည့်တော့လဲ ဘာမှမဟုတ်ဘူး ၊ အရှေ့ဘက်အာရုဏ်အတတ်မှာ အုန်းမောင်းခေါက်သံ သုံးချက်တိတိ ခေါက်ပီး ၊ လေပြေတွေ ဗြောခနဲ အသွင်ခံလိုက်ရတယ် ၊ ပီးတော့ ခြောက်ခြားစရာကောင်းသလို ၊ အိမ်မက်လိုလို အိမ်မက်တွေထဲ ရှေ့တိုးလိုက် လဲကျလိုက် ပြန်ထလိုက် ရိုက်ချခံလိုက်နှင့် အေးစက်စက်မျက်နှာ တစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်မှန်းမသိ ပိုင်ဆိုင်လာတယ် ။ တစ်ခါ တစ်ခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြင်ကပ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာ သွားရင်းလာရင်း ဒဏ်ရာတွေကို အရေးပေါ်ပစ္စည်းတစ်ခုလို ကိုယ့်ရင်ဘက်ထဲ ကောက်ကောက်ထည့်ခဲ့တယ် ။
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ကို ဝေဝေသီသီဖြတ်သန်းရင်း ကျွန်တော့် လက်ထဲမှာ ဗလာတစ်ချက်ကို ဆုပ်ကိုင်လို့ကောင်းတုန်း
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဟာ ကျွန်တော့အတွက် စစ်တလင်းထဲကို ဝတ်လစ်စတစ်နှင့် ပတ်ပြေးနေရသလို
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဆိုတာ ကျွန်တော့ရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ အမြောင်းမြောင်းထနေပေမယ့် ကံကြမ္မာက နေရာမှားပီး လင်းလတ်ခဲ့ ။
နောက်တော့ ဒီဇင်ဘာရဲ့ နှင်းစက်တွေကို တဖြည်းဖြည်းမြင်စပြုလာတဲ့ အချိန်မှာ အေးမြ ဖြူလွှနေတဲ့ တယောတစ်လက်ကိုပိုက်နေတဲ့ “ ဆိုဖီယာ ” နှင့်မျက်နှာခြင်းဆိုင်မိတယ် ။
ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ အတွေးတွေနှင့် နစ်လိုက် မြုပ်လိုက် ။
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ရဲ့ ဒဏ်ချက်တွေနှင့် ဒီဇင်ဘာရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ အသိတစ်ချက်ကပ်ကြည့်လိုက်တော့
လောကဓံကို မထီမဲ့မြင် မျက်နှာပေးနှင့် အေးစက်စက် ရင်ဆိုင်တတ်လာတယ် ။
စိတ်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကို မီးပိတ်အခန်းထဲက ဒေါင့်တစ်ဒေါင့်မှာ ငြိမ်ကုတ်ရင်း တစ်စစီဖဲ့ခြွေတတ်လာတယ် ။
တစ်ချက်တစ်ချက် စိတ်လက်ပျော်ရွင်လာရင် လူတွေကိုလူလုံးထွက်ပြပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ အပျော်တွေပြည့်နေတဲ့ မျက်နှာနှင့် စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြစ်တတ်လာတယ် ။ ( ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်က ဂျိုကာဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ် )
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ ရပ်တည်ချက် နည်းနည်းလဲ တည်ငြိမ်မှုပြုလာတယ်
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ လုပ်လက်စ အလုပ်တွေကိုလဲ စတင်အပြီးသက်ဖို့ လုံ့လထုတ်ဖြစ်လာတယ်
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ဟာ အထိအနာဆုံးပင့်သက်တွေ အကြိမ်ကြိမ်ချဖြစ်ပြီး အရင်ဘဝကိုလဲ မသိမသာ သမ်းသမ်းဝေဝေတွေထဲ လွမ်းနာကျလာတယ် ။
ဒီလိုနှင့် လွန်ခဲ့သော ဒီဇင်ဘာက သုံးသပ်မှုအနေအထား ထက်တော့ သိပ်ပီးမပြောင်းလဲပါဘူး ပိုပီးတော့တောင် “ ဗလာ ” ပီသလာတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ
ဆိုခဲ့သလို ၂၀၁၂ ရဲ့ ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးရက်မှာလဲ
( ထူးဆန်းစွာ တပ် လုပ်လာသော မိပစ် ကိုကျေးဇူးတင်လျှက် တောက်လျှောက် တပ် ပေးချင်တာကတော့
ဒီလောက်ပါပဲဗျာ ၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ရေးပေးကြပါ ...းPးP )
Posted in တဂ် ပို့စ် |6Replies
ခြေထောက်ပေါက်ပြဲနေသော အိမ်မက်များ ၁
Posted on Friday, 14 December 2012
ကျွန်တော့ကိုပြုံးပြခဲ့သေးတယ် ။ ။
မေမေဟာ ကျွန်တော့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြုံးကြည့်နေတယ် ။ ။
ဒီ့နောက် ကျွန်တော်က ကျွန်တော့မာနကို
ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကို ကိုယ်ရပ်လိုက်တယ် .................
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |7Replies
ငါ့အလွမ်းနှင့်နင့်နာမည်ကို ခေါ်လိုက်တာ နင်ကြားရလား မေနို
Posted on Wednesday,5December 2012
မင်းနာမည်က လယ်ချောင်းဝမှာ လာငြိတယ် ကောင်မလေးရေ
ငါ့ရင်ဘက်တွေကို နွေးထွေးစေပါ ။ ။
ငါ့အလွမ်းတွေက ထူပြစ်လာလေပဲ ဆိုတော့
“ အသည်းလွာပါးပါးနှင့်လူတစ်ယောက်ပဲ ” ဟု
ငါ့ကိုယ်ငါပဲ အပြစ်တင်မိခဲ့ပေါ့ ။ ။
ကျွန်တော်ရယ် . ခံစားမှုစာသားတစ်ချို့ရယ်
ထိုင်ခုံအလွတ်လေးရယ် ။ ။
ဒီလိုနှင့် ကျွန်တော်နှင့် ချစ်ခြင်းဟာ
ကူးလူးဆက်စံ ရင်းနှီးပျော်ဝင်လာခဲ့ ။ ။
နောက်တော့လဲ ကျွန်တော်က နေသားတကျဖြစ်ဖို့
Posted in ထိရှအက်ကွဲသံ |4Replies
anniversary (1) ကဗျာ (6) စိတ်ပျံ့လွင့်မှုအခြေအနေ (1) တဂ် ပို့စ် (2) ထိရှအက်ကွဲသံ (91) ဓါတ်ပုံသတင်း (1) နက်ဆိုး(Demon) ရဲ့ လက်သီးပုန်း (1) ပို့မော်ဒန် (1) ဖိတ်ကြားစာ (2) ဝတ္ထုတို (1) သတင်း (3) သီချင်းကဗျာ (1) မေးပို့စာ (2) နှိုးဆော်စာ (3)
တေးသွား အစ အဆုံး ၊ သံဇဉ် အက်အက် တစ်ပုဒ် ၊ ၂၀၁၂ရဲ့ ...
ငါ့အလွမ်းနှင့်နင့်နာမည်ကို ခေါ်လိုက်တာ နင်ကြားရလား ...
Idealulin's all about nothings
unicode myanmar font ထည့်နည်း
Phyo Myanmar Kyaw
Back to the years… and now
Wai Mhu Cho
click n` download ZawGyi
ဒါကတော့ ဘလော့ဒေး ထုတ်ဝေမှုပါ